မျိုးဆက်ပြတ်တော့မည့် ရတနာဂီရိမှ သီပေါမင်းဆွေတော်မျိုးတော်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မျိုးဆက်ပြတ်တော့မည့် ရတနာဂီရိမှ သီပေါမင်းဆွေတော်မျိုးတော်များ
မျိုးဆက်ပြတ်တော့မည့် ရတနာဂီရိမှ သီပေါမင်းဆွေတော်မျိုးတော်များ
Posted by အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး on Jul 2, 2012 in News, Opinions & Discussion | 24 comments
-၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ
(၄)စာရေးသူရည်ရွယ်ချက်-ဤစာအုပ်အား ဖတ်ရှု၍ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း မြေမျို၍ လူမျိုး
မပြုတ်၊လူမျိုမှ လူမျိုးပြုတ်မည်ဆိုသော မြန်မာ့ဆိုရိုး စကားကို အလေးအနက်ထား
သတိမူနိုင်ကြပါစေဟု မေတ္တာစိတ်ဖြင့် ရည်သန်လျှက်—-
(၅)စာအုပ်အမည်- မျိုးဆက်ပြတ်တော့မည့် ရတနာဂီရိမှ သီပေါမင်းဆွေတော်မျိုးတော်များ
“စာ အမြည်း အနည်းငယ်”
ယခုအခါ သီပေါမင်း၏ ဆွေတော်မျိုးတော် များမှာအတော်များနေပီဖြစ်သည်။မြန်မာ
နိုင်ငံရှိ သီပေါမင်း၏ မျိုးနွယ်များမှာ စုံစမ်းမေးမြန်း၍ ရေတွက်လျှင်ရနိုင်သေးသည်ထင်
သို ့သော် အိနိ္ဒယနိုင်ငံ မဟာရာစတြပြည်နယ် ရတနာဂီရိမြို့တွင် ကျန်ရှိနေသော သီပေါမင်းမျိုးနွယ်များကို
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်မလွယ်ချေ။သို ့အတွက် ကျွန်တော်သည်
ရတနာဂီရိသို ့ရောက်ခိုက် လုံ ့လစိုက်၍မေးမြန်းရသည်။
သီပေါမင်း၏ ပထမသမီးတော် အရှင်ထိပ်စုမြတ်ဖုရားကြီးသည် အိနိ္ဒယနိုင်ငံသား
မာရသီလူမျိုး ဂိုပယ် ဘာရိုဆဝန့်ဆိုသူနှင့် အိမ်ထောင်ကျ၍ ၁၉၀၆ခုနှစ်တွင် သမီး တုတု(Baisu Bai)
ကိုမွေးဖွားပြီး ၁၉၁၈ ခုနှစ်မွေးဖွားသည့် သမီးနှင့် ၁၉၁၉ခုနှစ်တွင် မွေး
ဖွားခဲ့သည့် သား့မှည လသားအရွယ်၌အင် ကွယ်လွန်ခဲ့ကြသည်။
ပထမသမီးတော် ထိပ်စုမြတ်ဖုရားကြီးတွင် သမီးတော် တုတုတစ်ဦးတည်းသာရှိ
သည်။တုတု သည် စံနန်းတော်မှ ကားမောင်းသူ ရှန်ကာပဝါ ဆိုသူနှင့်လက်ထပ်ခဲ့
သည်။တုတု ထက်အသက် (၁၅)နှစ်ခန် ့ကြီးမည်ဟုထင်ရသည်။ဒေါ်တုတုနှင့် ရှန်ကာပဝါ တို ့မှ
သား(၅)ဦးနှင့် သမီး(၂)ဦး စုစုပေါင်း(၇)ဦး မွေးဖွားခဲ့သည်။ယင်းတို ့မှာ
သီပေါမင်း၏ မြစ်တော် (ဒေါ်တုတု ၏ တတိယမြောက်သား) ချန်ဒရာ ကန် ့ရှန်ကာပဝါ
၏ပြောကြားချက်အရ သူ ့မိခင် ဒေါ်တုတုမှာ အသက်(၉၀)အရွယ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်
ယခုအခါ အသက်(၆၂)နှစ် အရွယ်ရှိ သီပေါမင်း၏ မြစ်တော် ချန်ဒရာ ကန် ့ရှန်ကာ
ပဝါ ၏ညီ ဆူရီးစ်ရှန်ကာပဝါ ၏သားအငယ်ဆုံး ပကာသနာ(သီပေါမင်း၏ တီ)က ဘေဘီ(သီပေါမင်း၏ တွတ်)
အမည်ရှိ သုံးနှစ်ခန် ့သမီးငယ်ကလေးကို မွေးဖွားခဲ့သည်။
သီပေါမင်း၏ အခြား တွတ်များလည်းရှိသေးသည်။ရတနာဂီရိရှိ သီပေါမင်း၏ မျိုးနွယ်
များမှာ (၄၀)ခန် ့ရှိပြီဟု ဆိုသည်။
မြန်မာလူမျိုးတို ့၏ ဆွေခုနှစ်ဆက် မျိုးခုနှစ်ဆက်အရ မိမိအထက် ဘ၊ဘိုး၊ဘေ၊ဘီ၊
ဘင်၊ဘဲ၊ဘောနှင့် မိမိအောက် သားသမီး၊မြေး၊မြစ်၊တီ၊တွတ်၊ကျွတ်၊ဆတ် ဟူ၍ရှိပေ
ယခုအခါ သီပေါမင်း၏ “တီ” ပကာသနာ သည် ပင်မိမိတို ့၏ ဘေးဖြစ်သူ အရှင်ထိပ်စုမြတ်ဖုရားကြီး နှင့်
ဂိုပယ် အာရိုဆဝန် ့ကိုပင်မသိ။ဘီဖြစ်သူ သီပေါမင်းဆို
လျှင် ဝေးစွ။လုံးဝ မသိဟု ဆိုရမည်။အထူးသဖြင့် မြန်မာမျိုးနွယ် ဟူ၍အင် မသိကြတော့ပေ။.
ကျွန်တော်နှင့် အမေးအဖြေလုပ်သည့် သီပေါမင်း၏ မြစ်တော်ချန်ဒရာ ကန် ့ရှန်ကာ
ပဝါ ကိုယ်တိုင်ပင် မြန်မာဘုရင် မျိုးနွယ်မှန်း သိသော်လည်း မြန်မာပြည်သို ့သွားရောက်
ရန် စိတ်မဝင်စားတော့ပေ။့သည် အစစရာရာ စီစဉ်ပေးလျှင် သွားချင်သေးသည်ဟု
ဆိုသည်။ သီပေါမင်း၏“ တွတ်” ဘေဘီ မှာ သုံးနှစ်အရွယ်ခန် ့ဖြစ်၍ ယင်းမှ မွေးဖွား
လာမည့် သီပေါမင်း၏ “ကျွတ်”နှင့် “့ဆက်” ့မှည နောင်နှစ်(၃၀)တွင် ကုန်ဆုံးတော့မည်
သို ့အတွက် အိနိ္ဒယနိုင်ငံ မဟာရာစတြပြည်နယ်၊သီပေါမင်း အကျဉ်းစံခဲ့ရာ ရတနာဂီရိမြို ့မှ သီပေါမင်း၏ မျိုးနွယ်များမှာ မြန်မာတို ့၏ ဆွေခုနှစ်ဆက်၊မျိုးခုနှစ်ဆက်အရ နောင်လာမည့် ၂၀၄ဝပြည့်နှစ်တွင် ဆွေဆက်မျိုး
ဆက်ပြတ်ပါတော့မည် ဟု ခန် ့မှန်းရပေသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ မြစ်တော်တွေကတော့ ဗမာရုုပ်နည်းနည်း ကျန်သေးတယ်။ သီပေါမင်းရဲ့ တခြား သားတော်သမီးတော်တွေ ရဲ့ဆွေမျိူးတွေ အကြောင်းပါသေးလား။
အင်း စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ သီပေါမင်း ပါတော်မူတော့ သူ့ရဲ့သားတော်တစ်ပါးက စာသင်တဲ့ကျောင်းမှာ ကျန်ခဲ့တယ်နော် နောက်ပိုင်း သူ့အကြောင်းကို သိချင်ပါတယ်ရှင်။ သိတဲ့သူများ ပြန်လည်ရှယ်ပေးပါဦး။
ကုလား ရုပ်တွေ ပေါက်ကုန်ကြပြီနော်.. သီပေါမင်း အကြောင်းဖတ်ဖူးတာ.. စိန်ရွှေတွေ အများကြီး ယူသွားတော့ တအိအိ နဲ့ ရောင်းစားပြီး ကောင်းကောင်းနေသွားပေမဲ့ ကျန်တဲ့ မျိုးဆက်ကတော့ ဆင်းရဲကြမယ် ထင်တယ်။
သီပေါမင်း၏ တီ တစ်ကောင်ရွာထဲတွင်ရှိပါသည် အသေးစိပ်သိလိုပါကဆက်သွယ်ပါ
နာမည်က ချန်ဒရာဟမ်ဘာဂါဖိုးထောင် အဟတ် ဟတ်ချိုး နေသိပ်မကောင်းချင်ဘူး
ဆွေစဉ် ခုနစ်ဆက် ပြီးသွားယင်မျိုးဆက်ပြတ်သွား
( ၃ ) ရေးသားသူ-မောင်ခိုင်ခန့်(အမျိုးသားစာပေဆုရ) ( ဒီစာအုပ်ကရော ဘာဆုရထားသလဲသိဘူးနော )
( ၁ ) စာမူခွင့်ပြုချက်အမှတ်-၄၀၀၁၉၈၀၃၁၂ -၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ -ပထမအကြိမ်၊အုပ်ရေ (၁၀၀၀)
တော်တော် ဟိုကောင် သရမ်းတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် ချိန်ကြပေါ့။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မန္တလေးနေပြည်တော်မှာနေတဲ့ဗမာ ဘုရင်က ကလားတွေနဲ့ အမျိုးတော်တယ်ဆိုတော့
ဆိုတော့ကာ ဒီစာအုပ်ဟာ အမှန်ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်သူသက်သေပြနိုင်မလဲသိဘူး
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ဖာသာ ပြည်ပမှာ လင်ယူသားမွေးတဲ့ကိစ္စဟာ
ရခိုင်က ကလားတွေကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့မရဘူး
ရခိုင် ကလားအရေးခင်းနဲ့ မဆိုင် မစိုင်
ကိုဝမ်းတွင်းရူး ရဲ ့အညွှန်းဟာ ရည်ရွယ်ချက် ပါနေတယ်
မင်းတို ့မြန်မာတွေရဲ ့ဘုရင့်မျိုးရိုးတောင် “““…..””” အဲဒါဘဲ လို ့ပြောနေတာလို ့တန်းမြင်တာဘဲ။
အရှိကို အရှိအတိုင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
@ကိုပေရေ—-ကျနော့်စိတ်ရင်း အမှန်က ဒီစာအုပ်လေးကို အားလုံးဖတ်စေချင်
အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ကျနော် ဒီစာအုပ်ကိုကြိုက်တာက စာရေးသူ၏
မသွားတယ် ၊ဇရပ်မှာကြဲမလို့၊ pdf စာအုပ်လေး မရနိုင်ဘူးလား
ရခိုင်က ဘင်္ဂံါလီလေ ၊ ဒါက ဟင်ဒီလား/ဟင်ဒူလား (မသိ) မတူဘူးမလား ?တူတူပဲလား ?. လေတယ်…
@ကိုပု ရေ ဘာကိုဆိုလိုသည်ကို အကိုပြောနေတာ နားမလည်ပါဘူး။
@အဂျစ်ရေ-PDF ဖိုင်တော့ မတွေ ့မိသေးပါဗျာ။
ဖိုးထောင်တို ့ကခုလို အားပေးလို ့ကျေးဇူးပါဗျာ။
အနက်ဖြန်မနက်အလုပ်လုပ်မှ ညစာစားရမှာ ခုတောင်ညစာကို ရှမ်းခေါက်ဆွဲပဲစားရတယ်
သီပေါမင်းမျိုးဆက်တွေအကြောင်း အမှတ်မမှားရင် မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်)လည်းရေးဖူးတယ်ထင်ပါတယ်။
သီပေါမင်းဟာ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မှုညံ့ရုံသာမက မိသားစုအုပ်ချုပ်မှုလည်းညံ့လို့သာ သမီးကြီးလည်းမာရသီလူမျိုးနဲ့ရတဲ့အပြင် မြေးတုတုပါ ကားမောင်းတဲ့သူနဲ့ရခဲ့တာဖြစ်မှာပါပဲ။
လူမျိုးခြားကြားမှာ ပို့ထားခံရလို့ နီးစပ်မှုအရ သွေးနှောရပေမယ့် ကားမောင်းတဲ့သူကိုယူဖြစ်တဲ့အထိလွတ်သွားတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။
(ကားမောင်းတဲ့ အလုပ်ကို အထင်သေးလို့မဟုတ်ပေမယ့် ဘုရင့် မြေးတော်နဲ့ ကားမောင်းသူဆိုတဲ့ အဆင့်အတန်းကွာဟချက်က ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။)
ဒါကြောင့်လည်း နောက်သမီးတော်တွေကို မြန်မာပြည်ကမှူးမျိုးမတ်မျိုးတွေနဲ့ လက်ဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖတ်ရပါတယ်။
?စတုတ္ထသမီးတော်ရဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ တော်ဘုရားကြီးဆိုတာ ဂျပန်ခေတ် အာရှလူငယ်အဖွဲ့မှာ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေ အားကစားလိုက်စားအောင် အားပေးခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်ခင်ဆွေဦးရဲ့ မိုးနဲ့ရေမှာဖတ်ရပါတယ်။
အခု ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း မဟာဝိဇယစေတီအဝင်ဝ ရှေ့ ကားမှတ်တိုင်အနီးမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေတဲ့ သီပေါမင်းမျိုးဆက်ဆရာတစ်ဦးရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
သင်ခန်းစာယူစရာကတော့ ညံ့တဲ့သူကိုခေါင်းဆောင်တင်မိရင် နှစ်ပေါင်းများစွာ မျိုးဆက်နဲ့ချီပြီး တိုင်းပြည်နဲ့ချီပြီး အဖတ်ဆယ်မရဘူးဆိုတာပါပဲ။
မမပဒုမ္မာရေ—သီပေါမင်း ပထမသမီးတော် ဖြစ်ရပ်ကို နမူနာယူပြီး ကျန်သမီးတော်သုံးပါးကို
မြန်မာမင်းညီမင်းသားများနဲ ့လက်ထပ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အင်္ဂလိပ်
အစိုးရထံက အသက်(၂၀)ပြည့်ပြီ သူ စာရင်းတောင်းယူခဲ့တယ်လို ့ပါထားပါတယ်ဗျာ။
၁၉၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁ရက်နေ ့တွင် ဒုတိယသမီးတော် အရှင်ထိပ်စုမြတ်ဖုရားလတ် သည်လက်သုံး
တော် ငယ်ကျွန်နှင့် ခိုးရာလိုက်ပြေး ၍ နှလုံးထိခိုက်ကာ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ရက်နေ ့ည သန်းခေါင်ချိန်တွင်
အပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်နော် အတည်ပြောတာ သီပေါမင်း အိန္ဒိယကို တကယ်ပါမသွားပါဘူး သီပေါမင်းနဲ့ စုဖုရားလတ် ပေါင်းပြီး လုပ်ဇာတ်ခင်းလိုက်တာ သမိုင်းကို အသေးစိပ် သံသယနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက် အဲဒီသမိုင်း မှာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိမ်ထားတာတွေရှိတယ် သိချင်ရင် ပို့စ်အသစ်တင်ပေးမယ် …….
လှျို့ဝှက်ချက်အားလုံးကို အမှတ်မထင်သိခဲ့ရတဲ့ ဗမာစစ်စစ် ဖိုးထောင်
ရတနာဂီရိ ကမျိုုးဆက်တွေက ဘုုရင့်ဆွေမျိုး အဆင့်ကိုု မထိန်းတာတော့ သိပ်မအံ့ဩပါဘူး။ ဘုုရင့်မျိုးဆက်ဆိုုပြီး ဂုုဏ်ယူဖိုု့ထက် သူများနိုုင်ငံမှာ နန်းကျ အချုပ်ကျ အဖမ်းခံ အကျဉ်းသားတွေဆိုုတာကိုု ရှက်စရာအဖြစ် တမင်မေ့ဖျောက်ထားရင်း ကအဆက်တွေပျက် ကုုန်တာ ပိုုဖြစ်နိုုင်တယ် ထင်တယ်။ သီပေါမင်း ရဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် သားသမီး မြေး တွေရဲ့ self-esteem သိပ်ကောင်းမယ်မထင်ပါ။ ဒါကြောင့် သူတိုု့ ခိုုးရာလိုုက်ပြေးတာ မပြစ်တင်လိုု့ မရပါ။
မြန်မာပြည်ကမျိုးဆက်တွေ ကတော့ ကိုုယ့်လုူမျိုးချင်း ထဲမှာပဲမိုု့ ပိုုခံသာမယ် ထင်တယ်။
အနော်ရထာမင်းလက်ထက်ကစလို့.. ဘုရင်တွေအဆက်ဆက်… နိုင်ငံတကာနဲ့ကူးလူးဆက်ဆံနေကြတာ…
ပုဂံနေပြည်တော်ဟာ. အဲဒီခေတ်က.. အခု(အိနိ္ဒယနဲ့..ချိုင်းနား) ရဲ့.. ကုန်သွယ်ဆက်ဆံရာ.. ဗဟိုကျမြို့တခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..
ဘုရင်အပါအဝင်… ဒေသခံတွေ.. အဲဒီခေတ်က နိုင်ငံခြား.. လူမျိုးခြားတွေနဲ့.. မယူကြ..မဆက်ဆံကြ.. ကျားဥပုဒ်စောင့်ကြတယ်များထင်နေကြသလားမသိ…
သီပေါမင်းပိုင်.. မင်းနေပြည်တော်က.. မန္တလေးသားတွေများ..
မြို့ထဲ..ချိုင်းနီးစ်တွေဝင်တော့. .အော်တယ်.. .အော်တယ်..
အဲဒီမြို့တည်ခဲ့သူတွေရဲ့မျိုးဆက်တွေကို.. လူမျိုးခြားတွေလက်က.. ကယ်တင်ထောက်ပန့်ဖို့.. အစီအစဉ်ရှိမရှိ..
An;သဂျီရေ ဟိုမှာ site ကို Delete လုပ်mလို့တဲ့ အဲဒါလေး အရင်လုပ်ပါဗျာ ဖတ်စရာ site မရှိဖြစ်သွာမှာဆိုးလို့
ထိုင်းဘုရင်ကိုဆိုလည်း သူတို့ တိုင်းသူပြည်သားတွေက ချစ်လိုက်ကြတာနော် ငုံတို့မြန်မာ ဘုရင်တွေကိုလည်း ပြည်သူတွေချစ်ခဲ့ကြပါတယ် ဒါပေမယ့် သီပေါမင်းကိုတော့ ဘုရင်တယောက်အနေနဲ့မချစ်ဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဘုရင်တယောက်ရဲ့အရည်အချင်း သူ့မှာမရှိလို့
မင်းတွေထဲမှာ ညံ့ဖျင်းတဲ့မင်းလို့ … ရာဇဝင်တွင်ခဲ့တဲ့ သီပေါမင်းရဲ ့မျိုးဆက်တွေ စာရင်းလိုက်ကောက်နေရပါလိမ့်နော် …. ။ သီပေါမင်းရဲ့ မျိုးဆက်တောင် ကုလားပြည်ရောက်ပြီး … ကုလားတွေလို ပြုမူနေထိုင် ဝတ်ဆင်တယ် ၊ ကုလား မျိုးနွယ်ဘက်နွယ်နေတာ .. အခုဆို .. မျိုးဆက်တောင် ပျောက်နေပြီထင်တယ် … ။
ငါတို့ အမေစု ၊ တိုင်းတပါးရောက်လို့ တိုင်းတပါးသားနဲ့ လက်ထပ်တာတောင် မြန်မာမှူ မြန်မာဟန်မပျောက်သေးတဲ့ အပြင် ၊ သားတွေ ၊ မြေးတွေ အကုန်လုံး မြန်မာစကား ကောင်းကောင်း ပြောတတ် ၊ မြန်မာဓလေ့ကောင်းကောင်း သိတတ်သေးတယ် … ။
အဲ့ဒါတွေပြောတာ… လူချင်းတူပေမယ့် .. စိတ်ဓါတ်ချင်းကွာတယ် …